DEG DEG: Maxkamada Garowe maanta miyay go'aan ka gaareysaa Kiiska lagu dilay Caaisha ilyaas? - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DEG DEG: Maxkamada Garowe maanta miyay go’aan ka gaareysaa Kiiska lagu dilay Caaisha ilyaas?
May 12, 2019 - Comments off
Maxkamadda Darajada koowaad ee gobalka Nugaal ayaa maanta u fariisatay dhageysigii 3aad ee Maxkamadeynta kuwa loo haysto in ay ka dambeeyaan falkii foosha xumaa ee lagu kufsaday, dilayna Caasho Ilyaas Aden oo ahayd gabar 13 sanno jir ah oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo.
Maxkamadda oo shalay yeelatay fadhigii ugu dheeraa, waxaa si aad ah qareenada difaacaya eedaysanayaasha ay u difaacanayeen kuwa lagu eedeeyey dambiga, waxay dafireen sharcinimada DNA-ga ama Hida-sadaha oo ay sheegeen in uusan waafaqsaneyn qanuunka dawliga ah.
Dacwad Oogayaasha dawladu waxay si toos ah u cadeeyeen in sadex kamid ah eedaysanayaasha ay kucad yihiin dhammaan kiiskan oo dhan, ayna tahay in maxkamaddu go`aan ka gaarto.
Xeer Ilaaliyaha dawladdu wuxuu sheegay in ay kalsooni ku qabaan dhammaan baaritaanada la sameeyey, oo ay tahay in Caasho Ilyaas Aden ay hesho Cadaalad, maxkamaddana ay ka sugayaan go`aankeeda oo ay taageersan yihiin.
Maxkamadda Darajada koowaad, waxay maanta mar kale dhageysan doonta eedaha iyo dacwadaha labada dhinac, waxana lafilayaa in ay qaadato qaraar rasmi ah oo ku wajahan kiiskan oo ah mid culus xasaasina ah.